बिरामीहरूलाई डराउनु बिना कसरी साइड इफेक्टहरू वर्णन गर्ने - चेकआउट | सेप्टेम्बर 2021
खेलहरु औषधि बनाम मित्र कम्पनी, चेकआउट औषधि जानकारी कम्पनी, औषधि जानकारी औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा समाचार, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार प्रेस कम्पनी, समाचार समाचार मनोरञ्जन कल्याण स्वास्थ्य चेकआउट
मुख्य >> चेकआउट >> बिरामीहरूलाई डराउनु बिना कसरी साइड इफेक्टहरू वर्णन गर्ने
ड्रग्स सेवन गर्दा त्यहाँ सधैं जोखिमहरू हुन्छन् - चाहे ती पर्चेका पर्चामा वा ओभर-द-काउन्टर औषधीहरू। साइड इफेक्ट हल्का जटिलताहरू, जस्तै थकान वा कब्ज , गम्भीर वा पनि जीवन-जोखिमजनक प्रतिक्रियाहरूमा। सम्भवतः असम्भव छ - बिरामीहरूको थोरै अल्पसंख्यकले मात्र प्रतिकूल प्रभावहरू अनुभव गर्दछन् possible सम्भावित जोखिमहरूको बारेमा सुन्नाले पनि मानिसहरूलाई चिन्तित र चिन्तित तुल्याउन सक्छ। फार्मासिष्टको रूपमा तपाईले पूर्ण रूपमा बुझ्नुपर्दछ, र प्रस्क्रिप्सन लिने सबैलाई सम्भावित जोखिम स्पष्टसँग बुझाउनु पर्दछ।
बिरामीहरूलाई डराउनु बिना तपाई कसरी साइड इफेक्टहरू कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ?
शुभ समाचार यो हो कि त्यहाँ औषधिहरूको साइड इफेक्टहरू वर्णन गर्दा तपाईं डर र तनाव कम गर्न कोसिस गर्न सक्ने थुप्रै तरिकाहरू छन्।
कसरी घर मा एक मूत्र पथ संक्रमण को निको पार्ने
१. शान्त रहनुहोस्।
बिरामीहरूलाई सहजै राख्ने उत्तम तरिकाहरू तिनीहरूसँग कुरा गर्दा शान्ति र अनुकम्पा मोडेल गर्नु हो। व्यक्तिहरूलाई विश्वास दिलाउनको लागि महत्त्वपूर्ण छ, विश्वास गर्न तिनीहरू राम्रो हातमा छन्। मैले प्रयोग गर्ने सब भन्दा प्रभावकारी प्रविधि भनेको शान्त र सीधा तरिकाले परामर्श दिनु हो, वर्णन गर्दछ Peace Uche, Pharm.D , हिलक्रेस्ट फार्मेसीको। आँखा सम्पर्क बनाउने र न्यानो बोलीले मेरा प्रत्येक बिरामीहरुलाई देखाउँदछ कि म साँच्चिकै तिनीहरूको हितको लागि हेरचाह गर्दछु,
२. सबै विवरण बताउनुहोस्।
सबै कुरा थोरै डराउने हुन्छ जब तपाईलाई के आशा गर्ने थाहा छैन। यो किन हो Kelley D. Carlstrom , Pharm.D।, BCOP, एक आन्कोलजी फार्मासिस्ट, कसरी औषधीहरूले काम गर्दछन् को पूरै तस्वीर रंग्न अतिरिक्त ध्यान दिन्छ। डा। कार्लस्ट्रम भन्छन्, बिरामीहरू (र सामान्य रूपमा मानिसहरु) अज्ञातदेखि डराउँछन्। र त्यो भय केवल तब बढिन्छ जब एक बिरामीको स्वास्थ्य लाइनमा छ।
डाक्टर कार्लस्ट्रम भन्छन्, किन डाक्टरले यो औषधी सिफारिस गरे र म कसरी यो अवस्थाको लागि काम गर्ने आशा गर्दछु भनेर छलफलबाट सुरु गर्छु। स्पष्ट रूपमा कसरी औषधिले कार्य गर्दछ र साइड इफेक्टको कारणले बिरामीलाई शान्त गर्न मद्दत गर्दछ। ज्ञान शक्ति हो, र यस अवस्थामा सशक्तीकरण। कार्लस्ट्रम जारी रहन्छ, उदाहरणका लागि, केमोथेरापीको साथ प्रयोग गरिएको सामान्य मतली औषधि कब्जको कारण हुन सक्छ। मँ भन्छु कि यो औषधि मतली / बान्ता रोक्न प्रभावी छ किनकि यसले दिमागमा एक विशिष्ट केमिकल ब्लक गर्दछ। यो रासायनिक पेटमा पनि बस्छ र जब यो त्यहाँ रोकिन्छ यसले कब्जा को कारण, यातायात को माध्यम बाट सुस्त बनाउँछ। के आशा गर्नु पर्ने पूर्ण तस्वीर हुनु भनेको आश्वासन हो।
Cal. शान्त हुने तरिकाहरू सुझाव दिनुहोस्।
बिरामीहरूलाई सम्झाउनुहोस् कि औषधी विशेष रूपमा उनीहरूलाई स्वस्थ बनाउन र राम्रो स्वास्थ्यमा फर्किनको लागि छानिएको हो। जब बिरामीहरुलाई एक औषधि को लागी नराम्रो भावनाहरु हुन्छन्, यसले ट्रिगर गर्न सक्दछ Nocebo प्रभाव , एक घटना जहाँ नकारात्मक अपेक्षाले उपचारले बढी नकारात्मक प्रभाव पार्दछ। अर्को शब्दहरुमा, डर वा चिन्ताले साइड इफेक्टहरु लाई नराम्रो बनाउन सक्छ। प्रारम्भिक चिन्ता हटाउनका लागि उपायहरू प्रस्ताव गर्नुहोस्, जस्तै केही लामो सास लिने सँगसँगै, बिरामीहरूलाई शान्त रहन र जानकारी प्रक्रियामा मद्दत गर्न।
सम्बन्धित: चिन्ता औषधोपचार र उपचार
The. चिन्ताको मूलमा जानुहोस्।
प्रायः जसो मेडिकलसँग, तपाईका बिरामीहरूको चिन्ताका बारे जति चिन्नुहुन्छ, त्यति नै तपाईले मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँसँग इमानदार हुनको लागि उनीहरूलाई प्रोत्साहन दिनुहोस्, र उनीहरूलाई नर्वस बनाएको कुरा पत्ता लगाउन प्रश्नहरू सोध्नुहोस्। बिरामीहरूलाई बताउनुहोस्, यदि तपाईं किन खास चिन्ताको कारण ब्यबहार गर्नुहुन्छ (उदाहरणका लागि, तपाईं दुखाइको औषधीको आदी हुनको लागि चिन्तित हुनुहुन्छ), जसले मलाई त्यस विशिष्ट चासोको लागि लक्षित अधिक विशिष्ट सल्लाह र सल्लाह प्रस्ताव गर्न मद्दत गर्दछ, डा। कार्लस्ट्रम सुझाव दिन्छन्।
गर्भावस्था को समयमा मतली को लागी कुन औषधि सुरक्षित छ
Patients. बिरामीहरूलाई सम्झाउनुहोस् कि गम्भीर साइड इफेक्टहरू सम्भव छैन।
अवश्य पनि कहिलेकाँही बिरामीहरू व्याकुल वा चिन्तित हुन्छन् जब उनीहरूले सम्भावित साइड इफेक्टको बारेमा सिक्छन्, तपाईंको सावधानीहरूको कुनै फरक पार्दैन। जब यो हुन्छ, रिचर्ड ह्यारिस, एमडी, फर्म.डी, का संस्थापक महान स्वास्थ्य र कल्याण , बिरामीलाई आश्वासन दिन्छ कि कुनै पनि साइड इफेक्ट पत्थर मा सेट गरिएको छैन वा बिल्कुलै आसन्न छ।
डा। ह्यारिस सुझाव दिन्छन् कि दुबै औषधीहरूले स्थायी जटिलता निम्त्याएमा निर्धारित रूपमा लिईन्छ। मैले तिनीहरूलाई सूचित गरें कि हामी धेरै किसिमका सम्भाव्यता कभर गर्दैछौं र ती मध्ये कुनै पनि वास्तविक रूपमा हुँदैन। साथै, ती केहि औषधिहरू राम्रोसँग प्रयोग गर्दा स्थायी वा टर्मिनल साइड इफेक्टहरू निम्त्याउँदछन्।
The. सकारात्मकमा ध्यान दिनुहोस्।
डा। उचे सहमत छन् र औषधि को फाइदाहरू हाइलाइट सिफारिश। म उनीहरूलाई सम्भावित साइड इफेक्टको दुर्लभताको बारेमा आश्वासन दिन्छु, र सम्भावित साइड इफेक्टको बारेमा औषधीको प्रत्यक्ष लाभको समीक्षा गर्दछु, उनी बताउँछिन्।
प्रतिकूल प्रभावहरूका बारे चिन्तित बिरामीहरूले उनीहरूको औषधी लिने सम्भावना कम हुन्छ। उनीहरूको डरलाई शान्त पार्न समय निकाल्दै, तपाईंले सुनिश्चित गर्नुहुनेछ कि उनीहरूले अझ छिट्टै नै राम्रो महसुस गर्नेछन्।
Ritalin र adderall एउटै कुरा हो
के हुन्छ यदि तपाइँ कुनै खमीर संक्रमण संग diflucan लिनुहुन्छ
तपाईं mucinex छिटो अधिकतम संग sudafed लिन सक्नुहुन्छ
के राम्रो छ जब तपाइँ बिरामी हुनुहुन्छ
के हुन्छ यदि तपाइँ रक्सी संग एडविल लिनुहुन्छ